दुई डिआईजी बिच आफ्नै मातहतका प्रहरी निलम्बन गर्ने प्रतिष्पर्धा किन चल्यो ? | Safal Khabar
दुई डिआईजी बिच आफ्नै मातहतका प्रहरी निलम्बन गर्ने प्रतिष्पर्धा किन चल्यो ?
बुधबार, ०३ भदौ २०७७, ०८ : ५४
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका दुईजना डिआईजी बिच अहिले आफ्नै मातहतका प्रहरीलाई निलम्बन गर्ने प्रतिष्पर्धा जस्तो चलेको छ । प्रहरी अधिकारी बिच कहिले गुन्डालाई गोली हान्ने प्रतिस्पर्धा त कहिले पदका लागि हानाथाप हुदै आएको त सबैलाई थाहै छ ।
तर अहिले बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ का डिआईजीबीच यस्तो प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । मातहतका प्रहरीले गल्ती गरेको भन्दै छानबिनका लागि आफ्ना निलम्बन भन्दै प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गर्ने होडबाजी समेत यि दुई जना बिच चलेको छ ।
दुई साताअघि २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले असई सुरेश सहनीलाई निलम्बन गरेकोबारे विज्ञप्ति नै निकालेको थियो । सर्लाहीको मोहनापुर चौकीमा कार्यरत असई सहनीलाई आर्थिक लेनेदनको आरोपमा निलम्बन गरिएको थियो । जुन विषयलाई प्रदेश कार्यालयले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रचार गराएको थियो ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली प्रहरीले गाडीसँग पैसा लिएको आरोपमा हवल्दार कमल खड्का र जवान वीरबहादुरप्रसाद यादवलाई निलम्बन ग¥यो । त्यस विषयलाई लिएर बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । आइतबार जारी गरेको बिज्ञप्तीमा हालसम्म १३ जना प्रहरीलाई यसरी निलम्बन गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ मा डिआईजी सिह गएयता आठ जना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् ।
प्रहरीमा सुधारका लागि गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ । तर, आन्तरिक छानबिनको विषयलाई मिडियामा प्रचार नै गरेर आफु राम्रो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई भने प्रहरीभित्रै अनौठो मानिएको छ । प्रदेश नम्बर २ का डिआईजी धिरजप्रताप सिंह र बागमती प्रदेशका बसन्त कुमार लामाबीच यस्तो गजबको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
दुवै जना एउटै ब्याची हुन् । दुवै जनाले निलम्बन अभियान अघि बढाएपछि वर्षोदेखि घुमुवाका रुपमा कार्यरत प्रहरीलाई भने आफ्नो गोप्य टिममै राखेका छन् । दृष्टि साप्ताहिकबाट